Laser Laser miato
Laser azo zahana Co2 Fractional
Laser Tube Laser Tube2
Fitsaboana angovo avo lenta
Fanesorana volo Laser Diode
Laser tamin'ny Picosecond
Fitsaboana laser an'ny ampahany Fr. Famerenana Laser Erbium amin'ny ampahany
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-10-20
Fractional CO2 Laser Resurfacing Ahoana ny fomba fiasan'izy io: Fitaovana famerenan'ny gazy karbonika (CO2) mampiasa jiro infrared izay ampitaina amin'ny fantsona feno karbôna dioxide hamoronana ratra mikraoba amin'ny sela kendrena. Rehefa tototry ny hoditra ny hazavana, lasa etona ny tavy, mitarika any ...
Moa ve ny milina fampihenana laser 1060nm Diode izay safidy tsara kokoa ho an'ny tavy mafy kibo, tantanana fitiavana ary tavy hafa?
Raha niezaka mafy nanala ny tavy kibo mafy loha ianao, mitantana ny fitiavana ary karazan-tavy hafa amin'ny vatana, tsy isalasalana fa nandinika ireo doka amin'ny fahita lavitra momba ny CoolSculpting ianao. Ireo doka ireo dia manasongadina ny fahaizan'ny fitsaboana tsy manasitrana manala tavy sisa tavela aorian'ny sakafo sy fanatanjahantena ...
Fanesorana volo maharitra tsy misy fanaintainana 808
Ny rafitra mangatsiaka safira tsy misy fanaintainana dia miantoka ny fitsaboana azo antoka sy tsy misy fanaintainana. Azo antoka Ny teknolojia ao ambadiky ny laser Diode 808 dia miantoka ny hoditra hitrandraka laser vitsivitsy kokoa, hampihena ny mety hisian'ny pigmentation hyper. Haingam-pandeha Ny varotra haingana, ny sakany amin'ny pulse lava, ny toerana lehibe ary ny tombony tena mampangatsiatsiaka dia mahatonga ...
Address:Efitra 110, fananganana tokontany 1 18 Jingxing Street, Changping, Beijing, CN